အောင်မြေ: March 2009
ဗိုလ်ချိုမိ ဂူပြောက်သည် မဟာဗောဓိပုံ ကွမ်းတောင် ပေါက်လိုဏ် နှစ်ဆင့်ဘုရားဖြစ်ပြီး ခရစ် (၁၃)ရာစုနှစ်က တည်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတို့က ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် အထက် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများက အင်္ဂလိပ်တို့အား ဆန့်ကျင် တော်လှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ပုဂံမှ ဗိုလ်ချိုသည် ထင်ရှားသော နယ်ချဲ့ တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၈၉၆ တွင် သီရိပစ္စယာရှိ ဂူပြောက်အတွင်း အင်္ဂလိပ်တို့က ဗိုလ်ချိုအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် အတွက် ဗိုလ်ချိုမိ ဂူပြောက်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချိုမိဂူပြောက် ဘုရားတွင် နံရံဆေးရေး ပန်းချီများနှင့် အင်္ဂတေ ပန်းတော့လက်ရာများ ရှိသည်။ ကြက်တငို အ၀ိုင်းဈ ထောင့်ဘောင်ပန်း နှင့် စက်ဝိုင်းအတွင်းမှ ပန်းကွက်အလှများ နံရံတွင် ဘောင်ခတ် ထားသည့် သစ်ရွက်ပုံ ပန်းတန်း၊ စိန်ကွက်ပုံနံရံ ပန်းချီများနှင့် ခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် ရေးဆွဲထားသည့် လှေပုံများ ရှိသည်။
ဗိုလ်ချိုမိဂူပြောက်၏ မဟာဗောဓိ ကွမ်းတောင်မှ လေးထောင့်ကွက် အတွင်း ရုပ်ပုံပါသည့်အ၀ိုင်း ကွက်ပုံ ဖော်ထားသည့် အင်္ဂတေ ပန်းတော့လက်ရာများ၊ အ၀င်မုခ်မှ ရာမ လက်ညှိုးပုံ တံကဲပန်း၊ တိုင်ဖုံးပန်း၊ တိုင်အောက်ခံ အိုးမှ အင်္ဂတေပန်းနှင့် အရုပ်များ ချင်မိတ်တိုးတန်းမှ အင်္ဂတေပန်းများ ကို လေ့လာနိုင်သည်။
ဦးမောင်မောင် (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) ၏ ပုဂံစေတီပုထိုးများ
Posted by အောင်မြေ at 8:36 PM3comments Links to this post
တစ်ရံရောအခါ ရဟန်းတို့သည် ခရီးသွားကြကုန်၏။ ထိုခရီးသွား ရဟန်းတို့အထဲ၌ ပဉ္စင်းဖြစ်စ ဟန်းတစ်ပါးလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုပဉ္စင်းသစ်သည် အဖော်ရဟန်းတို့၏ နောက်၌ တစ်ပါးတည်း ကွဲကျန်ရစ် ခဲ့လေ၏။ လမ်းခရီး ကြား၌ ထိုရဟန်းသစ်၏ မယားဟောင်းနှင့် တွေ့ဆုံလေသည်။ ထိုအခါ မယားဟောင်းက " သြော်- သင်သည် ရဟန်းပြုလိုက်သလား " ဟုမေးသဖြင့် " အင်း- ဟုတ်ပေ၏။ ယခု ငါ ရဟန်းပြုလိုက်ပေပြီ " ဟု ပြန်ပြောလေသည်။ မယားဟောင်းက " သြော်- ဤသို့ဖြစ်လျှင် ပြောရဦးမည်၊ ရဟန်းဆိုသည်မှာ မေထုန်အမှုကို ရနိုင်ခဲ့လှ၏။ ယခု သင်သည် မေထုန်မှီဝဲပါ၊ လာပါ " ဟု ဖိတ်ခေါ်လေ၏။ ဤသို့ဖြင့် ရဟန်းသစ်သည် မယားဟောင်းနှင့်အတူ မေထုန်ပြုကျင့် ပြီးမှ ခရီးဆက်လေ၏။
အဖော်ရဟုန်းများသည် အချိန်ကြာမြင့်မှ ရောက်ရှိလာသော ထိုရဟန်းသစ်အား "အဘယ်ကြောင့် ယခုလောက် ကြာမြင့်မှ ရောက်လာသနည်း " ဟုမေးမြန်း လေသည်။ ရဟန်းသစ်သည် မယားဟောင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ မေထုန်ဖြင့် ဖိတ်ကြားခြင်း၊ မေထုန်မှီဝဲခြင်း အကြောင်းစုံကို ပြန်လည်ပြောကြား လေ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတို့သည် ရဟန်းသစ်၏ မေထုန်မှီဝဲခြင်း ကိစ္စအကြောင်းစုံကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား လျှောက်ကြား ကြလေ၏။ ဤတွင် ဗုဒ္ဓသည် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းများ အတွက် အထူး စောင့်ထိန်း ဆောက်တည်ရမည့် ၀ိနည်းကျင့်ဝတ် လေးမျိုးကို ဟောကြားတော်မူ၏။
ရဟန်းတို့သည် ပဉ္စင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ပြီးသော ရဟန်းသည် မေထုန်အမှုကို မပြုရ၊ လူမိန်းမကို မဆိုထားဘိ၊ တိရစ္ဆာန်မ ကိုလည်း မေထုန်မပြုရ။ အကယ်၍ ပြုငြားအံ့၊ ထိုသူသည် ရဟန်း မဟုတ်တော့ပေ၊ ရဟန်းကောင်းတို့နှင့် ဆက်ဆံရောနှောခွင့် မရှိတော့ပေ။ (ပါရာဇိက ကျလေပြီ) ဥပမာအားဖြင့် ဦးခေါင်း ပြတ်ပြီးသော ယောက်ျားသည် ထိုဦးခေါင်းနှင့် ကိုယ်ကို ပြန်၍ ထိစပ်သော်လည်း တစ်ဖန် အသက်ရှင်ခြင်း မရှိနိုင် သကဲ့သို့တည်း။
ရဟန်းတို့၊ ပဉ္စင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ပြီးသော ရဟန်းသည် ပိုင်ရှင်မပေးသော သူတစ်ပါး၏ ဥစ္စာကို ခိုးယူလိုသောစိတ်ဖြင့် မခိုးယူရ၊ ၀ါးခြမ်းစိတ် ကဲ့သို့သော အသေးအဖွဲ ပစ္စည်းကိုပင်လျှင် မခိုးယူရ။ အကြင်ရဟန်းသည် အသပြတစ်မတ်၊ တစ်မတ်ထက် အလွန်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်မတ် ထိုက်တန်သော ပစ္စည်းနှင့် တစ်မတ်ထက် အလွန် ထိုက်သော ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေ ခိုးယူငြားအံ့ ထိုသူသည် ရဟန်းမဟုတ်တော့ပေ။ ရဟန်းကောင်းတို့နှင့် ဆက်ဆံရောနှောခွင့် မရှိတော့ပေ။ (ပါရာဇိက ကျလေပြီ)
ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီးသော ရဟန်းသည် သေစေလိုသော စေတနာဖြင့် သတ္တ၀ါတို့ကို မသတ်ဖြတ်ရ၊ ပိုးရွ ခြပုန်းမျှ ကိုပင်လဆင် မသတ်ဖြတ်ရ။ အကြင်ရဟန်းသည် လူသတ္တ၀ါတို့ကို သတ်ဖြတ်ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် ရဟန်းမဟုတ်တော့ပေ၊ ရဟန်းကောင်း တို့နှင့် ဆက်ဆံရောနှောခွင့် မရှိတော့ပေ။ (ပါရာဇိက ကျလေပြီ)
(၄) တရားဖြင့် မကြွားဝါရ
ရဟန်းတို့၊ ပဉ္စင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီးသော ရဟန်းသည် လူတို့၏ ကုသိုလ် ကမ္မပထတရားထက် လွန်မြတ်သော ဈာဉ် မဂ်ဖိုလ် တရားကို မိမိ၌ ရရှိသည်ဟာ မပြောဆိုရ၊ မိမိသည် ဆိတ်ငြိမ်ရာ အရပ်၌သာ မွေ့လျော်သည်၊ အဘယ်တရားကို အားထုတ်နေသည် ဟူ၍ပင် မပြောဆိုရ၊ အကြည်ညို ခံလိုခြင်း၊ လာဘ်လာဘ ရလိုခြင်း၊ ၀ါကြွားလိုခြင်းဖြင့် မပြောဆိုရပေ။ အကြင်ရဟန်းသည် မမှန်ကန်သော အလိုဆိုးဖြင့် မိမိ၌ တကယ်မရှိသော ဈာဉ် မဂ်ဖိုလ် တရားကို ၀ါကြွားပြောဆို ငြားအံ့၊ ထိုသူသည် ရဟန်းမဟုတ် တော့ပေ။ ရဟန်းကောင်း တို့နှင့် ဆက်ဆံရောနှောခွင့် မရှိတော့ပေ။ (ပါရာဇိက ကျလေပြီ)
ဥပမာအားဖြင့် လည်ဆစ်ပြတ်ပြီးသော ထန်းပင်သည် တစ်ဖန်ပြန်၍ စည်ပင်ကြီးပွားခြင်း မဖြစ်နိုင် သကဲ့သို့တည်း
( ၀ိနည်းမဟာဝဂ်ပါဠိတော်၊ မဟာခန္ဓက )
( လေးမြိုင် ၏ ဗုဒ္ဓ၏ ဥပမာတစ်ထောင် )
Posted by အောင်မြေ at 11:52 PM 1 comments Links to this post
Labels: ဗုဒ္ဓ၏ဥပမာတစ်ထောင်, ရဟန်းမဟုတ်ကြောင်း လေးမျိုး
ကိလေသာအာရုံ ကာမဂုဏ် တရားတို့၌ နှစ်သက် သာယာဖွယ်ရာ ဟူ၍ ရှုမြင်လျက် နေသူသည် တပ်မက်ခြင်း တဏှာ ဖြစ်ပွား၏။ ထိုတဏှာကြောင့် စွဲလမ်းခြင်း ဥပါဒါန် ဖြစ်ပွား၏။ ထိုဥပါဒါန်ကြောင့် ဘ၀ဖြစ်၏။ ဘ၀ကြောင့် ပဋိသန္ဓေ နေရခြင်း ဇာတိ ဖြစ်၏။ ဇာတိကြောင့် အိုခြင်း ဇရာ၊ သေခြင်း မရဏ၊ စိုးရိမ်ခြင်း သောက၊ ငိုကြွေးခြင်း ပရိဒေ၀၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ၊ နှလုံးမသာယခြင်း ဒေမနဿ၊ ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ဥပါယာသ တို့ဖြစ်ကုန်၏။
ကိလေသာအာရုံ ကာမဂုဏ် တရားတို့၌ နှစ်သက် သာယာဖွယ်ရာ ဟူ၍ မရှုမြင်ဘဲ အပြစ်ဟု ရှုမြင်လျက် နေသူကား တပ်မက်မှု တဏှာ ချုပ်၏။ တဏှာချုပ် သောကြောင့် စွဲလမ်းမှု ဥပါဒါန် ချုပ်၏။ ဥပါဒါန် ချုပ်သောကြောင့် ဘ၀ချုပ်၏။ ဘ၀ချုပ်သောကြောင့် ဇာတိချုပ်၏။ ဇာတိချုပ်သောကြောင့် ဇရာ၊ မရဏ၊ သောက၊၊ ပရိဒေ၀၊ ဒုက္ခ၊ ဒေါမနဿ၊ ဥပါယာသ တို့ ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏။
( နိဒါန၀ဂ္ဂ၊ နိဒါနသံယုတ်၊ ဒုက္ခ၀ဂ်၊ ဥပါဒါနသုတ်၊ သံယောဇနသုတ် )
Posted by အောင်မြေ at 8:41 PM2comments Links to this post
ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ)သည် ကွမ်းတောင်ပေါက် လိုဏ်နှစ်ဆင့်ဂူ ဘုရားဖြစ်ပြီး အေဒီ(၁၁၁၃) တွင် အမတ်ကြီး ရာဇကုမာရ် (ကျန်စစ်သားမင်း နှင့် သမ္ဘူလ မိဖုရား တို့၏သား)က တည်ခဲ့သည်။ ကျန်စစ်သားမင်းသည် အေဒီ (၁၀၈၄) တွင် ပုဂံထီးန်းကို ရရှိခဲ့ပြီး နန်းစံနှစ် (၂၈) နှစ် အေဒီ (၁၁၁၃) အရောက်တွင် မကျန်းမမာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျန်စစ်သား နှင့် သမ္ဘူလ မိဖုရား တို့မှ မွေးဖွားသည့် ရာဇကုမာရ်သည် ဖခင်၏ ကျေးဇူးကို အောင့်မေ့သတိရကာ ရွှေဆင်းတု တစ်ဆူ ပြုလုပ်၍ ဖခင် ကျန်စစ်သားမင်းထံ သွားရောက်ပြီး ဤဘုရားကို ဖခင်အတွက် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖခင်ပေးထားသော ကျွန်သုံးရွာကို လည်းဤဘုရားအား လှူကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကျန်စစ်သားမင်းက ရာဇကုမာရ်၏ မိဘကျေးဇူး သိတတ်မှုအတွက် နှစ်သက် ၀မ်းမြောက်စွာနှင့် သာဓုခေါ်ကာ ရေစက်သွန်းခဲ့သည်။ ရာဇကုမာရ်သည် ထိုဘုရားကို ဌာပနာ၍ ဂူပြောင်းကြီး (မြင်းကပါ) ဘုရားကို တည်ခဲ့သည်။
မြစေတီကျောက်စာ (ယခု ရာဇကုမာရ် ကျောက်စာ) တွင် ဘုရား၏ မူလဘွဲ့တော် မပါရှိသော်လည်း ဂူဘုရားသည် မြင်းကပါရွာတွင် တည်ရှိပြီး ဂူဘုရား အတွင်း အပြင် အပြောက် အပြိန်းတို့ဖြင့် မွမ်းမံ တန်ဆာဆင်ထား၍ ဂူပြောက်ကြီး ဘုရားဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ) တိုက်မအထက်တွင် ဆင်ခြေလျော အမိုး၊ ပစ္စယာများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ကွမ်းတောင်ပေါက် ထားသည်။ ကွမ်းတောင် ပတ်လည် လေးမျက်နှာတွင် လေးထောင့် ဖောင်းပြားများ ဖော်၍ ကြက်လျာတွင် မုခ်ကပ်သုံးခု ပါရှိသည်။ နံရံဆေးရေး ပန်းချီကားများ၊ အင်္ဂတေ ပန်းတော့ လက်ရာများ၊ ကျောက်ဆစ် ပန်းတမော့ လက်ရာများ ရှိသည်။
ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ) ဘုရားအတွင်း နံရံဆေးရေးပန်းချီများမှာ ဗုဒ္ဓ၀င် ပန်းချီများဖြစ်သည့် မြတ်စွာဘုရား တာဝတိံသာမှ ဆင်းလာခန်း၊ မြတ်စွာဘုရား တရားဟောခန်း နှင့် ဘုရား ဝေသာလီပြည်သို့ လှေဖြင့် သွားပုံ (၅၅၀) ဇာတ်ကွက်များ၊ ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၆)ချက်၊ (၅၄၄)ဘီစီတွင် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် အဇာတသတ်မင်း လက်ထက် ပထမသင်္ဂါယနာ တင်ပွဲ၊ (၄၄၄)ဘီစီတွင် ဝေသာလီပြည် ကာဠာ သောကမင်းလက်ထက် ဒုတိယသင်္ဂါယနာ တင်ပွဲ၊ (၃၀၉) ဘီစီတွင် ပါဋလပုတ်ပြည် သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီး (အသောက) မင်းလက်ထက် တတိယသင်္ဂါယနာ တင်ပွဲ အပါအ၀င် အခြား ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ များဖြစ်သည့် သီဟိုဠ်နိုင်ငံ ဧဠာရမင်းသည် နန်းတော်ရှေ့တွင် တရားခေါင်းလောင်း ချိတ်ဆွဲကာ တရားသဖြင့် အုပ်ချုပ်ပုံ၊ သီဟိုဠ်နိုင်ငံ ဒေ၀ါနံပီယမင်း နှင့် ရှင်မဟိန္ဒတို့ အမေးအဖြေခန်း ပန်းချီများ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နတ်သား နတ်သမီးများ ကနေပုံ၊ နန်းတွင်းသူ နန်းတွင်းသားများပုံ၊ ပုဂံခေတ် အမျိုးသား အမျိုးသမီးပုံ များလည်း ရှိသည်။ (၁၉၈၄) မှစ၍ ရှေးဟောင်း သုတေသနဦးစီးဌာန သည် ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီဖြင့် ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ) ဘုရား အတွင်းရှိ နံရံဆေးရေး ပန်းချီများနှင့် မင်စာများကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြန်လည် ထင်ရှား ပေါ်လွင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အတွက် ဘုရားရှိ နံရံဆေးရေး ပန်းချီများ နှင့် ရှေးဟောင်း မွန်ဘာသာ ကမ္ပည်းစာများကို ဖတ်ရှု လေ့လာနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ) ဘုရား၏ အပြင်မျက်နှာစာ များရှိ ဘီလူးပန်းဆွဲ၊ ထောင့်ဘောင်ပန်း အင်္ဂတေပန်း စသည့် အင်္ဂတေ၊ ပန်းတော့ လက်ရာများနှင့် ဘုရားရှိ ကျောက်လေသာ ပြူတင်းပေါက်များ ဖောက်ထားပုံကို လေ့လာနိုင်သည်။ ဂူဘုရားရှိ အလယ်ဗဟို ဂန္ဓကုဋီတိုက် ပတ်လည်တွင် စင်္ကြပတ်လမ်းရှိပြီး စင်္ကြအတွင်း နံရံ မုခ်ကပ်များရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ကျောက်ဆစ် ပန်းတမော့ လက်ရာများကို လေ့လာနိုင်သည်။
( ဦးမောင်မောင် - ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၏ ပုဂံစေတီပုထိုးများ )
Posted by အောင်မြေ at 9:23 PM2comments Links to this post
ဓမ္မစကြာသုတ် တော်မှာ ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ၏ တရားဦး (BUUDDHA'S FIRST SERMONS, 544 B.C.) ဖြစ်ပြီး...
မြန်မာပြန်ရေးသားသူမှာ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ပိဋကတ္တယ ပါရဂူ သုတ ဗုဒ္ဓ ဘုရားတဆူ ပျံ့ကြူကျော်ကြားတော်မူသော ကျေးဇူးရှင် လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီး [Ven. LEDI SAYADAW (Known to the World of Buddhists as:-) Rev. Dr. Ledi Maha Thera of Mandalay, 1846-1923]ဖြစ်ပါသည်။
၀ိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်အတွက် ယိုးဒယား ဘုရင် မင်းမြတ်၏ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင် (Dr. PE MAUNG TIN, Winner of Prize for his English translation of VISUDDHIMAGGA from His Majesty The King of Thailand, 1888-1973)မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် မက နိုင်ငံရပ်ခြား အသီးသီးသို့ရောက်ရှိ နေထိုင်နေကြသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တရားချစ်ခင် သူတော်စင် အပေါင်းအား ကြည်ညိုသဒ္ဓါ ပွားများနိုင်စေရန် အလို့ငှာ ဤနေရာမှ တဆင့် “ကဗျာမလေး” အနေဖြင့် မျှဝေတင်ပြခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်ရှင့်...။
စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ၍ သောကအပူများ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
Posted by ကဗျာမလေး at 7:18 PM2comments Links to this post
ဓမ္မစကြာ (ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်)
နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ ဗာရာဏသိ ယံ
၀ိဟရတိ ဣသိပတနေ မိဂဒါယေ
တတြ ခေါ ဘဂ၀ါ ပဉ္စ၀ဂ္ဂိယေ
ဒွေမေ ဘိက္ခဝေ အန္တာ ပဗ္ဗဇိတေန
ယော စာယံ ကာမေသု ကာမသုခလ္လိကာ နုယောဂေါ
ဟီနော ဂမ္မော ပေါထုဇ္ဇနိကော
ယော စာယံ အတ္ထကိလမထာ နုယောဂေါ
ဒုက္ခော အနရိယော အနတ္ထသံဟိတော
ဧတေ ခေါ ဘိက္ခဝေ ဥဘော အန္တေ အနုပဂမ္မ
မဇ္ဈိမာ ပဋိပဒါ တထာဂတေန အဘိသမ္ဗုဒါ
ကတမာ စ သာဘိက္ခဝေ မဇ္ဈိမာ ပဋိပဒါ
အယမေ၀ အရိယော အဋ္ဌင်္ဂိကော မဂ္ဂေါ
အယံ ခေါသာ ဘိက္ခဝေ မဇ္ဈိမာ ပဋိပဒါ
ဣဒံ ခေါ ပန ဘိက္ခဝေ ဒုက္ခံ အရိယသစ္စံ
အပ္ပိယေဟိ သမ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော
ပိယေဟိ ၀ိပ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော
ယံ ပိစ္ဆံ န လဘတိ တံပိ ဒုက္ခံ
သံခိတ္တေန ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္ဓာ ဒုက္ခာ
ဣဒံ ခေါ ပန ဘိက္ခဝေ ဒုက္ခ သမုဒယံ
ယာယံ တဏှာ ပေါနောဗ္ဘ၀ိကာ
နန္ဒီရာဂသဟဂတာ တတြတတြာ ဘိနန္ဒိနီ
ဣဒံ ခေါ ပန ဘိက္ခဝေ ဒုက္ခ နိရောဓံ
ယော တဿာယေ၀ တဏှာယ
ဣဒံ ခေါ ပန ဘိက္ခဝေ ဒုက္ခ နိရောဓ
ဂါမိနီ ပဋိပဒါ အရိယသစ္စံ
“ဣဒံ ဒုက္ခံ အရိယသစ္စ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ
ပုဗ္ဗေ အနနုဿုတေသု ဓမ္မေသု
“တံ ခေါ ပနိဒံ ဒုက္ခံ အရိယသစံ္စ
ပရိညေယျ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ
ပရိ ညာတ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ
“ဣဒံ ဒုက္ခသမုဒယံ အရိယသစ္စ” န္တိ
မေ ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ အနနုဿုတေသု
“တံ ခေါ ပနိဒံ ဒုက္ခသမုဒယံ
အရိယသစံ္စ ပဟာတဗ္ဗ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ
“တံ ခေါ ပနိဒံ ဒုက္ခသမုဒယံ အရိယသစံ္စ
ပဟီန” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ
“ဣဒံ ဒုက္ခ နိရောဓံအရိယသစ္စ” န္တိ မေ
ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ အနနုဿုတေသု
“တံ ခေါ ပနိဒံ ဒုက္ခနိရောဓံ အရိယသစံ္စ
သစ္ဆိကာတဗ္ဗ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ
သစ္ဆိကတ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ
“ဣဒံ ဒုက္ခနိရောဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ
အရိယသစ္စ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ ပုဗ္ဗေ
“တံ ခေါ ပနိဒံ ဒုက္ခ နိရောဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ
အရိယသစံ္စ ဘာဝေတဗ္ဗ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ
“တံ ခေါ ပနိဒံ ဒုက္ခနိရောဓ ဂါမိနီ ပဋိပဒါ
အရိယသစံ္စ ဘာဝိတ” န္တိ မေ ဘိက္ခဝေ
ယာဝကီဝဉ္စ မေ ဘိက္ခဝေ ဣမေသု
စတူသု အရိယ သစ္စေသု ဧ၀ံ တိပရိဝဋ္ဋံ
ဒွါဒသာကာရံ ယထာဘူတံ ဉာဏ ဒဿနံ
န သုဝိသုဒ္ဓံ အဟောသိ
နေ၀ တာဝါဟံ ဘိက္ခဝေ သဒေ၀ကေ
လောကေ သမာရကေ သဗြဟ္မကေ
သဿမဏ ဗြာဟ္မဏိယာ ပဇာယ
သဒေ၀မနုဿာယ “အနုတ္တရံ သမ္မာ သမ္ဗောဓိံ
အဘိသမ္ဗုဒ္ဓေါ” တိ ပစ္စညာသိံ
ယတော စ ခေါ မေ ဘိက္ခဝေ ဣမေသု စတူသု
အရိယ သစ္စေသု ဧ၀ံ တိပရိ ၀ဋ္ဋံ ဒွါဒသာကာရံ
ယထာဘူတံ ဉာဏဒဿနံ သုဝိသုဒ္ဓံ အဟောသိ
အထာဟံ ဘိက္ခဝေ သဒေ၀ကေ လောကေ
သမာရကေ သဗြဟ္မကေ သဿမဏ ဗြာဟ္မဏိယာ
ပဇာယ သဒေ၀မနုဿာယ “အနုတ္တရံ
သမ္မာ သမ္ဗောဓိံအဘိသမ္ဗုဒ္ဓေါ” တိ ပစ္စညာသိံ
ဉာဏဉ္စ ပန မေ ဒဿနံ ဥဒပါဒိ
“အကုပ္ပါ မေ ၀ိမုတ္တိ အယမန္တိမာ
ဇာတိ နတ္ထိ ဒါနိ ပု နဗ္ဘဝေါ” တိ
အတ္တမနာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂိယာ ဘိက္ခူ ဘဂ၀တော
ဣမသ္မိံစ ပန ဝေယျာကရဏ သ္မိံ
သဗ္ဗံ တံ နိရောဓ ဓမ္မ” န္တိ
ပ၀တ္တိတေ စ ပန ဘဂ၀တာ ဓမ္မစက္ကေ
ဘုမ္မာ ဒေ၀ါ သဒ္ဒ မနုဿာဝေသုံ
“ဧတံ ဘဂ၀တာ ဗာရာဏသိယံ
ဣသိပတနေ မိဂဒါယေ အနုတ္တရံ
ဓမ္မစက္ကံ ပ၀တ္တိတံ အပ္ပဋိ ၀တ္တိယံ
သမဏေန ၀ါ ဗြဟ္မဏေန ၀ါ
ဒေဝေန ၀ါ မာရေန ၀ါ ဗြဟ္မုနာ ၀ါ
ကေနစိ ၀ါ လောကသ္မိံ” တိ
ဘုမ္မာနံ ဒေ၀ါနံ သဒ္ဒံ သုတွာ စာတုမဟာရာ
ဇိကာ ဒေ၀ါ သဒ္ဒ မနုဿာ ဝေသုံ “….. ….. …..”
စာတု မဟာ ရာဇိကာ ဒေ၀ါ ….. “….. ….. …..”
တာဝတိံသာ ဒေ၀ါ ….. ….. ….. “….. ….. …..”
ယာမာ ဒေ၀ါ ….. ….. ….. ….. “….. ….. …..”
တုသိတာ ဒေ၀ါ ….. ….. ….. “….. ….. …..”
နိမ္မာနရတိ ဒေ၀ါ ….. ….. ….. “….. ….. …..”
ပရ နိမ္မိတ ၀သ၀တ္တီဒေ၀ါ ….. ….. “….. ….. …..”
ဗြဟ္မ ကာယိကာ ဒေ၀ါ သဒ္ဒ မနုဿာ ဝေသုံ
ဣတိဟ တေန ခဏေန တေန လယေန တေန
မုဟုတ္တေန ယာဝ ဗြဟ္မလောကာ သဒ္ဒေါ
အယဉ္စ ဒသသဟဿိ လောကဓာတု
အပ္ပမာဏော စ ဥဠာရော သြဘာသော
လောကေ ပါတုရဟောသိ အတိက္ကမ္မ ဒေ၀ါနံ
အထခေါ ဘဂ၀ါ ဣမံ ဥဒါနံ
“အညာသိ ၀တ ဘော ကောဏ္ဍညော
အညာသိ ၀တ ဘော ကောဏ္ဍညော” တိ
ဣတိ ဟိဒံ အာယသ္မတော ကောဏ္ဍညဿ
အထခေါ အာယသ္မာ အညာသိ ကောဏ္ဍညော
အပရပ္ပစ္စယော သတ္တုသာသနေ ဘဂ၀န္တံ
“လဘေယျာဟံ ဘန္တေ ဘဂ၀တော
သန္တိကေ ပဗ္ဗဇ္ဇံ လဘေယျံ ဥပသမ္ပဒ” န္တိ
“ဧဟိ ဘိက္ခူ” တိ ဘဂ၀ါ အဝေါစ
သွာက္ခာတော ဓမ္မော စရ ဗြဟ္မစရိယံ
သမ္မာ ဒုက္ခဿ အန္တကိရိယာယာတိ
သာဝ တဿ အာယသ္မတော ဥပသမ္ပဒါ
ဗြဟ္မာ နတ် လူ သုံးဘုံသူ တို့၏ ပူဇော် အထူးကို ခံတော်မူထိုက်ကြောင်းဖြစ်သော သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ဝိမုတ္တိဂုဏ် ၀ိမုတ္တိဉာဏ ဒဿနဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပေထသော သစ္စာဉေယျ ဓမ္မအပုံအလုံးစုံကို အကုန်မကျန် မြတ်ရွှေဉာဏ်ဖြင့် အမှန်ထိုးထွင်း အလင်းထင်ပေါ် သိမြင်တော်မူပေထသော ဣဿရိယ ဓမ္မယသ သီရိကာမပယတ္တ တည်းဟူသော ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား ဘုရားတပည့်တော်တို့၏ ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်စေပါသတည်း ဘုရား။
တပါးသောအခါ၌ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီ နေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး၌ ရှေးခါခေတ်ဟောင်း ရသေ့သူမြတ်အပေါင်းတို့၏ သက်ဆင်းရာ သားသမင်အပေါင်းတို့ကို ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏။
ထိုသို့ သီတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောဏ္ဍည အမှူး ငါးဦး အစု အဝေးရှိကုန်သော ရဟန်းတို့ကို ခေါ်တော်မူ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ သာသနာတော်ထမ်း ရဟန်းဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် နှစ်ပါးကုန်သော အစွန်းသမုတ် အယုတ်ခေါ်ငြား ဤတရားတို့ကို မမှီဝဲအပ်ကုန်။
(အစွန်းအယုတ်ဟု သမုတ်အပ်ကုန်သော) တရားနှစ်ပါးတို့သည် အဘယ်တရားတို့နည်း။
(ချစ်သားရဟန်းတို့) ယုတ်မာသော ရွာသူရွာသား မြို့သူမြို့သားတို့၏ လက်ကိုင်ဖြစ်သော ပုထုဇဉ် သတ္တ၀ါတို့၏ အလေ့အမူအရာ ဖြစ်သော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်မဆိုင်သော အကျိုးတစုံတရာနှင့်မျှ မစပ်ယှဉ်သော လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၌ ကာမချမ်းသာကို သာယာတုံငြား လိုက်စားအားထုတ်မှု ဟု ဆိုအပ်သော အကြင်အစွန်းသမုတ် အယုတ်တရားမျိုးသည်လည်း ရှိလေ၏။ ကိုယ်ချမ်းသာမဖက် ဆင်းရဲမှုသက်သက်မျှသာ ဖြစ်သော အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်မဆိုင်သော အကျိုးတစုံတရာနှင့် မစပ်ယှဉ်သော ရေချိုးမီးလှုံ ဆူးပုံ၌အိပ်ခြင်း အစရှိသည့် မိမိကိုယ်ပင်ပန်းအောင်သာ လွန်စွာကြိုးပန်းလေ့ရှိသော အကြင်အစွန်းသမုတ် အယုတ်တရားမျိုးသည်လည်း ရှိလေ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ စင်စစ် နှစ်ပါးကုန်သော ထို အစွန်းသမုတ် အယုတ်တရားတို့ကို မကပ်မရောက်မူ၍ ငါဘုရားသည် အကြင်အလယ်လမ်းဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်ကို သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အလင်းဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူအပ်လေပြီ။
(ထို အလယ်လမ်း ဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်သည်)
သစ္စာလေးပါးကို မြင်စေနိုင်ဘိသော ပညာမျက်စိကိုလည်း ပြုပြင်စီရင်တတ်ပေ၏။
မဘောက်မပြန် မှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာ သိစေခြင်းငှါ
ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းစေခြင်းငှါ ဖြစ်၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ငါဘုရားသည် အကြင်အလယ်လမ်းဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်ကို သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်အလင်းဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူအပ်လေပြီ။
ထို အလယ်လမ်း ဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်သည် အဘယ်နည်း။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လက်ကိုင်ဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားသည်ပင်လျှင်တည်း။
ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားဟူသည် အဘယ်နည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤအလယ်လမ်းဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်ကို ငါဘုရားသည်
သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်အလင်းဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူအပ်လေပြီ။
ဤအလယ်လမ်း ဟု ဆိုအပ်သော အကျင့်မြတ်သည်
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤ ဆင်းရဲခြင်း သဘော ဟု ဆိုအပ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယ သစ္စာ တရားသည် ရှိ၏။
(အဘန်ဘန်) ပဋိသန္ဓေနေရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
(အဘန်ဘန်) အိုရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
(အဘန်ဘန်) နာရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
(အဘန်ဘန်) သေရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
မချစ်မနှစ်သက်အပ်ကုန်သော သူတို့နှင့် အတူတကွ ပေါင်းသင်း၍ နေရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
ချစ်နှစ်သက်အပ်ကုန်သော သူတို့နှင့် ကွေကွင်းခွဲခွါ၍ နေရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
အကြင် တောင့်တခြင်း အလို ရှိခြင်းကိုလည်းမရ၊ ထို လိုအင်ဆန္ဒဖြင့် တောင့်တတိုင်း မရမှုကြီးသည်လည်း ဆင်းရဲ၏။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဥပါဒါန်တရားတို့၏ စွဲလမ်းရာ ဖြစ်ကုန်သော ခန္ဓာ ငါးပါးတို့သည် ဆင်းရဲ အစစ်တို့ သာတည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယ သစ္စာ တရားသည် ရှိ၏။
အကြင် သာယာနှစ်သက်မှုကြီးဟု ဆိုအပ်သော တဏှာဓာတ်သည် ဘ၀ အသစ်အသစ်ကို တဘန် ဖြစ်စေတတ်သော သဘောရှိ၏။
နှစ်သက်ခြင်း တပ်မက်ခြင်းဖြစ်၍ နေ၏၊ ထိုထို အာရုံတို့၌ မြူးခုန်ပြေးလွှား ကျက်စား သာယာ၍နေ၏။
ကာမအာရုံ တို့၌ ခုံမင်တပ်မက်၍ နေသော တဏှာ၎င်း
မြဲသည် ဟု အယူရှိ၍ သဿတဒိဋ္ဌိ နှင့် ယှဉ်သော တဏှာ၎င်း
မမြဲ ဟု အယူရှိ၍ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ နှင့် ယှဉ်သော တဏှာ၎င်း
ဤ တဏှာသဘော သုံးပါးပင်လျှင်တည်း။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤ ဒုက္ခခပ်သိမ်းတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းမှု သဘောကြီး ဖြစ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယသစ္စာ တရားသည် ရှိ၏။
ထို တဏှာ လောဘ၏သာလျှင် အကြင် အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပျောက် ချုပ်ဆုံးမှုသည်၎င်း၊
(ဤ နိဗ္ဗာန် သဘောတရားကြီးပင်လျှင်တည်း)
ချစ်သားရဟန်းတို့ ဤ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းမှု နိဗ္ဗာန်သို့ ဆိုက်ရောက်ကြောင်း အကျင့်မြတ် သဘောကြီး ဖြစ်သော မဘောက်မပြန် မှန်ကန်သော အရိယ သစ္စာတရားသည် ရှိ၏။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လက်ကိုင်ဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရား သည်ပင်လျှင်တည်း။
(ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရားဟူသည်) အဘယ်နည်း။
(ဤ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရား အကျင့်လမ်းကြီးပင်လျှင်တည်း)
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဤ တေဘုမ္မက ၀ဋ်တရားစုသည် ဆင်းရဲစင်စစ် အမှန် ဖြစ်သော အရိယာ သစ္စာကြီး တပါး ဟူ၍ ” ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရား မဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
မြင်နိုင်တုံဘိ ဉာဏ်မျက်စိသည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
ထိုးထွင်းဟုတ်မှန် အသိဉာဏ်သည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
အနှံ့အပြား မြင်အားသန်စွာ ဉာဏ်ပညာသည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
ထိုးထွင်းသိတတ် ၀ိဇ္ဇာဓာတ်သည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
မောဟ မှောင်ကြီး ဖျက်ဆီးထွန်းပြောင် အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဆင်းရဲစင်စစ် အမှန် ဖြစ်သော ဤအရိယသစ္စာတရား ကို ပိုင်းပိုင်း ခြားခြား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိအပ်သိထိုက်၏-ဟူ၍ ” ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဆင်းရဲစင်စစ် အမှန် ဖြစ်သော ဤအရိယသစ္စာတရား ကို ပိုင်းပိုင်း ခြားခြား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သိခြင်းကိစ္စ ပြီးစီးလေပြီ ”-ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဤ တပ်မက်သာယာသော တဏှာလောဘသည် ဆင်းရဲခြင်း ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော အရိယာသစ္စာကြီး တပါး ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဆင်းရဲခြင်း ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော ဤ အရိယ သစ္စာတရားကို ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ အလုံးစုံ ပယ်သင့်ပယ်ထိုက်၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ ဆင်းရဲခြင်း ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သော ဤ အရိယ သစ္စာတရားကို ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ အလုံးစုံ ပယ်ခြင်းကိစ္စ ပြီးပြီ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဤ နိဗ္ဗာန်သည် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် ဖြစ်သော အရိယသစ္စာတပါး ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် ဖြစ်သော ဤ အရိယသစ္စာတရားကို ကိုယ်တိုင် ဆိုက်ရောက် မျက်မှောက် ပြုအပ် ပြုထိုက်၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် ဖြစ်သော ဤ အရိယသစ္စာတရားကို ကိုယ်တိုင် ဆိုက်ရောက် မျက်မှောက် ပြုခြင်းကိစ္စ ပြီးပြီ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဤမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတရားအစုသည် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းလမ်းမှန် ဖြစ်သော အရိယ သစ္စာကြီးတပါး” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းလမ်းမှန် ဖြစ်သော ဤ အရိယသစ္စာတရားကို ဘာဝနာ အလုပ်ဖြင့် အားထုတ်ကြိုးစား ပွါးများအပ် ပွါးများထိုက်၏ ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌
ချစ်သားရဟန်းတို့ “ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ ဇာတ်သိမ်းရာ အမှန် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်း လမ်းမှန် ဖြစ်သော ဤ အရိယ သစ္စာတရားကို ပွါးများခြင်း ကိစ္စ ပြီးပြီ” ဟူ၍ ငါဘုရားသည် ရှေးဘုရားမဖြစ်မီ ကာလ၌ တရံတခါမျှ မကြားစဘူးကုန်သော တရားအပေါင်းတို့၌ မြင်နိုင်တုံဘိ ဉာဏ်မျက်စိသည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ အကြင်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ငါဘုရားအား လေးပါးကုန်သော ဤ မဘောက်မပြန် မှန်ကန်တုံလတ် အရိယ သစ္စာမြတ်တို့၌ ဤသို့ ပြဆိုအပ်ပြီးသောအတိုင်း သစ္စဉာဏ် ကိစ္စဉာဏ် ကတဉာဏ်အားဖြင့် စက်လည်ပုံ သုံးပါးရှိသော သုံးပါး လေးလီအားဖြင့် အခြင်းအရာ တဆယ့်နှစ်ပါးရှိသော ဟုတ်မှန်သောအတိုင်း ပိုင်းခြားထင်ထင် ဉာဏ်အမြင်သည် စင်စင်ကြယ်ကြယ် မဖြစ်ပေါ်လာသေး။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ထိုမျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ငါဘုရားသည် နတ်ပြည်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မာရ် နတ်လွှမ်းခြုံ ၀သ၀တ္တီဘုံနှင့်တကွဖြစ်သော ဗြဟ္မာ့ဘုံနှင့်တကွဖြစ်သော အနန္တ စကြာဝဠာ ကမ္ဘာ လောကဓာတ်တိုက်ဘောင်အတွင်း၌ ရဟန်းပုဏ္ဏားနှင့်တကွဖြစ်သော နတ်လူ နှင့်တကွ ဖြစ်သော သတ္တ၀ါများအလယ်၌ “အတုမရှိသော ဘုရားဖြစ်ရန် သဗ္ဗညုတ ရွှေဉာဏ်ကို ပိုင်ပိုင်ရရှိ ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူပြီ” ဟူ၍ ၀န်ခံတော် မမူသေး။
ချစ်သားရဟန်းတို့ အကြင်အခါ၌သာလျှင် ငါဘုရားအား လေးပါးကုန်သော ဤ မဘောက်မပြန် မှန်ကန်တုံလတ် အရိယ သစ္စာမြတ်တို့၌ ဤသို့ ပြဆိုအပ်ပြီးသောအတိုင်း သစ္စဉာဏ် ကိစ္စဉာဏ် ကတဉာဏ်အားဖြင့် စက်လည်ပုံ သုံးပါးရှိသော သုံးပါး လေးလီအားဖြင့် အခြင်းအရာ တဆယ့်နှစ်ပါးရှိသော ဟုတ်မှန်သောအတိုင်း ပိုင်းခြားထင်ထင် ဉာဏ်အမြင်သည် စင်စင်ကြယ်ကြယ် ဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ထိုအခါ၌သာလျှင် ငါဘုရားသည် နတ်ပြည်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မာရ်နတ် လွှမ်းခြုံ ၀သ၀တ္တီဘုံ နှင့်တကွဖြစ်သော ဗြဟ္မာ့ဘုံနှင့်တကွဖြစ်သော အနန္တ စကြာဝဠာ
ကမ္ဘာ လောကဓာတ်တိုက်ဘောင်အတွင်း၌ ရဟန်းပုဏ္ဏားနှင့်တကွဖြစ်သော နတ်လူ နှင့်တကွ ဖြစ်သော သတ္တ၀ါများအလယ်၌ “အတုမရှိသော ဘုရားဖြစ်ရန် သဗ္ဗညုတ ရွှေဉာဏ်ကို ပိုင်ပိုင်ရရှိ ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူပြီ” ဟူ၍ ၀န်ခံတော် မူပြီ။
ချစ်သားရဟန်းတို့ ငါဘုရား၏ ဟုတ်တိုင်းအမှန် အမြင်သန်သော ပစ္စဝေက္ခဏာ ဉာဏ်တော်သည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပြီ။ ငါဘုရား၏ အရဟတ္တဖိုလ် ဉာဏ်တော်သည် မပျက်မစီးနိုင် ခံ့ခိုင်တည်တံ့လေပြီ။ ငါဘုရား၏ ဤ ဘ၀ အဖြစ်သည် အဆုံးစွန်သော အဖြစ်ပေတည်း။ ယခု အခါ၌ ဘ၀ အသစ် တဘန်ဖြစ်ဘို့ အရေးသည် မရှိတော့ချေ။ ဤသို့ ဉာဏ်အမြင်သည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်၍လာပြီ။
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤ ဓမ္မစက္က ပ၀တ္တန သုတ္တန်ကို ပဌမ လက်ဦး မြွက်ကျူး ဟောကြားတော်မူလေ၏။
ကောဏ္ဍည အမှူး ငါးဦး အစုအဝေးရှိ ကုန်သော ရဟန်းတို့သည် ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောတော်မူ အပ်သော တရားတော်ကို အရိယသစ္စဉာဏ် ထက်သန် ပွင့်လင်း ၀မ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြကုန်သည် ဖြစ်၍ ရွှင်လန်းအားရ နှစ်သက်ကြလေကုန်သတည်း။
ဂါထာမဖက် စုဏ္ဏိယ သက်သက် ဖြစ်သော ဤ ဓမ္မစက္က ပ၀တ္တန သုတ်တော်ကြီးကို ဟောတော်မူအပ်သည် ရှိသော် ရှည်သော အသက်တော်ရှိသော အရှင် ကောဏ္ဍည မထေရ်အား ကိလေသာ မြူတို့မှ စင်ဖြူကင်းဝေးသော မှောက်မှားဒိဋ္ဌိ အညစ်အကြေး မရှိသော သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ် ဟု ဆိုအပ်သော တရားမျက်လုံးသည် ထင်ရှားစွာ ပေါ်ပေါက်လေ၏။
“အလုံးစုံသော တေဘုမ္မက၀ဋ်ဒုက္ခတရားစုသည် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းလျှင် အကြောင်းရင်းရှိ၏။ ထိုအလုံးစုံသော တေဘုမ္မက၀ဋ်ဒုက္ခတရားစုသည် မကြွင်းမကျန် အမှန်ချုပ်ဆုံးခြင်း သဘောရှိ၏။” (ဤသို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်သိ ဉာဏ်မျက်စိသည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။)
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဓမ္မစကြာသုတ်တော်ကြီးကို ဟောတော်မူ အပ်ပြီးသည် ရှိသော်ကား ဘုမ္မစိုးနတ်တို့သည် ကောင်းချီးဆူညံ ဟစ်ကြွေးသံကို တပြိုင်နက် ကြွေးကြော်ကြလေကုန်၏။
“အို နတ်များအပေါင်းတို့ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီ နေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး၌ သားသမင်အပေါင်းတို့ကို ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော ရသေ့ သူမြတ် အပေါင်းတို့၏ ဆင်းသက်ကျရောက်ရာ ဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး အတွင်း၌ အတုမရှိသော ဤ ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကို ဟောတော်မူအပ်ပေပြီ။ ဤ ဓမ္မစကြာ တရားတော်မြတ်ကို ရဟန်းသည်၎င်း ပုဏ္ဏားသည်၎င်း နတ်သည်၎င်း မာရ် နတ်သည်၎င်း ဗြဟ္မာသည်၎င်း အနန္တ စကြာဝဠာ ဤ ကမ္ဘာ လောကဓာတ် တိုက်ဘောင် အတွင်း၌ တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ၎င်း မဆီးတား မကန့်ကွက်နိုင်ချေ”
(ဤသို့ တပြိုင်နက် ကြွေးကြော်ကြလေကုန်၏။)
ဘုမ္မစိုးနတ်တို့၏ ကြွေးကြော်သံကို ကြားကြကုန်သည်ရှိသော် စာတုမဟာရာဇ်နတ် အများတို့သည် ကောင်းချီးဆူညံ ဟစ်ကြွေးသံကို တပြိုင်နက် ကြွေးကြော်ကြလေကုန်၏။
“….. ….. ….. ….. ….. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..”
စါတု မဟာရာဇ် နတ်အများတို့သည် ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
တာဝတိံသာ နတ်အများတို့သည် ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
ယာမာ နတ်အများတို့သည် ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
တုသိတာ နတ်အများတို့သည် ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
နိမ္မာနရတိ နတ်အများတို့သည် ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
ပရ နိမ္မိတ ၀သ၀တ္တီ နတ်အများတို့သည် ….. ….. ….. ….. “….. ….. ….. ….. …..”
ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီးဆူညံ ဟစ်ကြွေးသံကို တပြိုင်နက် ကြွေးကြော်ကြလေကုန်၏။
“အို နတ် ဗြဟ္မာများ အပေါင်းတို့ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီ နေပြည်တော်ကြီး၏ အနီး၌ သားသမင်အပေါင်းတို့ကို ဘေးမဲ့ပေး၍ မွေးရာဖြစ်သော ရသေ့ သူမြတ် အပေါင်းတို့၏ ဆင်းသက်ကျရောက်ရာ ဖြစ်သော မိဂဒါဝုန်တောကြီး အတွင်း၌ အတုမရှိသော ဤ ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကို ဟောတော်မူအပ်ပေပြီ။ ဤ ဓမ္မစကြာ တရားတော်မြတ်ကို ရဟန်းသည်၎င်း ပုဏ္ဏားသည်၎င်း နတ်သည်၎င်း မာရ် နတ်သည်၎င်း ဗြဟ္မာသည်၎င်း အနန္တ စကြာဝဠာ ဤ ကမ္ဘာ လောကဓာတ် တိုက်ဘောင် အတွင်း၌ တစုံတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ၎င်း မဆီးတား မကန့်ကွက်နိုင်ချေ”
ဤသို့လျှင် ထိုခဏအတွင်း၌ ထိုလယအတွင်း၌ ထိုမုဟုတ်အတွင်း၌ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ့ဘုံ တိုင်အောင် ကျော်စောသော အသံသည် အဆင့်ဆင့် ပျံ့နှံ့၍ တက်လေ၏။
ဤ စကြာဝဠာ အပေါင်း လောကဓာတ် တိုက်တသောင်းသည်လည်း အောက်သို့နိမ့်လျက် တသိမ့်သိမ့် တုန်လှုပ်လေ၏။
အထက်သို့ခုန်တက်၍ တသွက်သွက် တုန်လှုပ်လေ၏။
အေးယဉ်လွှဲသကဲ့သို့ နွှဲကာ နွှဲကာ တုန်လှုပ်လေ၏။
နတ်အပေါင်း ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့၏ တန်ခိုးအလုံးစုံကို သိမ်းခြုံလွှမ်းမိုး၍ စကြ၀ဠာ အပေါင်း လောကဓာတ် တိုက်တသောင်း၌ အတိုင်းမသိ နှိုင်းယှဉ်ဘွယ်မရှိသော ကြီးကျယ် မွန်မြတ်သော ရောင်လျှံထိန်ညီး အလင်းဓာတ်ကြီးသည် အဆန်းတကြယ် အံ့သြဘွယ် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
ထိုအခါ၌ ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ၀မ်းမြောက်မြွက်ကြား ဤ ဥဒါန်းတော် အမိန့်စကားကို ကျူးရင့်တော်မူလေ၏။
အို လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့ ငါ့ သားတော်ကြီးဖြစ်သော ကောဏ္ဍညသည် အသိဉာဏ် အလင်းပေါက်၍ သောတာပန်အဖြစ်သို့ ရောက်လေပြီတကား။
ဤ ဥဒါန်းစကားတော်အားဖြင့် ရှည်သောအသက်တော်ရှိသော အရှင် ကောဏ္ဍည မထေရ် မြတ်ကြီးအား အညာသိ ကောဏ္ဍည ဟူ၍သာလျှင် ဤ အမည်ထူးသည် ဖြစ်လေသတည်း။
ထို သောတာပန် ဖြစ်ပြီးသောအခါ၌ ရှည်သော အသက်တော်ရှိသော အရှင် အညာသိ ကောဏ္ဍညသည် ကိုယ်တိုင် မြင်အပ်ပြီးသော တရားရှိသည်ဖြစ်၍
ကိုယ်တိုင် ဆိုက်ရောက်အပ်ပြီးသော တရားရှိသည်ဖြစ်၍
ကိုယ်တိုင် သိအပ်ပြီးသော တရားရှိသည်ဖြစ်၍
ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် သက်ဝင်အပ်ပြီးသော တရားရှိသည်ဖြစ်၍
ယုံမှားခြင်း၏ တဘက်ကမ်းသို့ ရောက်အောင် ကူးမြောက်ပြီးသည် ဖြစ်၍
သို့လော သို့လော တွေးတောယုံမှားခြင်းမှ လွတ်ကင်းသည်ဖြစ်၍
ကြောက်ရွံ့မှုကင်းလျက် ရဲရင့်ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဖြစ်၍
မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်အတွင်း၌ သိမြင်ပြီးသော ဉာဏ် အစွမ်းအားဖြင့် သူတပါးတို့အား ယုံကြည်အားထားခြင်း မရှိလေသောကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားကို ဤသို့သော စကားကို လျှောက်ထားတောင်းပန်လေ၏။
“အရှင်ဘုရား - တပည့်တော်သည် ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရား၏ အထံတော်၌ ရဟန်းအဖြစ်ကို ရလိုပါသည်ဘုရား။ ပဉ္ဇင်းအဖြစ်ကို ရလိုပါသည်ဘုရား။” ဤသို့ လျှောက်ထား တောင်းပန်လေ၏။
မြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့ မိန့်တော်မူ၏။
“အို ရဟန်း လာလော့ ငါဘုရားသည် တရားတော်မြတ်ကို ကောင်းစွာ ဟောကြားတော် မူအပ်ပြီ။ သံသရာ ၀ဋ်ဆင်းရဲ၏ ကိစ္စတုံး၍ အဆုံးတိုင်အောင် ပြုခြင်းငှာ ကောင်းစွာ မြတ်သော မဂ်အကျင့်ကို ကျင့်လေလော့”
ဤသို့ မိန့်တော်မူ၏။ ရှည်သော အသက်တော်ရှိသော ထို အရှင် ကောဏ္ဍညအား ထို ဧဟိဘိက္ခု - ပဉ္ဇင်း အဖြစ်သည်သာလျှင် ဖြစ်လေသတည်း။
ဓမ္မစက္ကပ္ပ၀တ္တန သုတ်သည် ပြီးပြီ။
Homage to the exalted the worthy, the fully enlightened the Buddha supreme.
At one time, The Bhagava was dwelling in Benares, at the deer park, Isipatana.
Then the Bhagava addressed the group of five Bhikkhus.
Those two extremes, Bhikkhus, should not be followed by one who has given up the world.
A life given to attractive sense pleasures, low, vulgar of the average folk, ignoble, unprofitable.
Andalife given to self-torment, which is suffering, ignoble and unprofitable.
Now, Bhikkhus, by avoiding both these extremes, there isamiddle course, fully understood by the Tathagata.
Making for vision,
Making for knowledge,
which leads to tranquility,
to higher knowledge,
And what Bhikkhus, is the middle course fully understood by the Tathagata.
It is, this Noble Eightfold Path itself.
Right bodily action,
This, Bhikkhus, is the middle course fully understood by the Tathagata.
And this, Bhikkhus, is the Noble
Truth about suffering,
Birth is suffering,
Old age is suffering,
Illness is suffering,
Death is suffering,
Association with those we do not love is suffering,
Seperation from those we love is suffering,
Not to get what one desires is suffering,
In brief, the five aggregates of clinging are suffering.
Truth of the uprising of suffering
It is that craving, which is potent for rebirth, is accompanied by pleasure and lust, seeking satisfaction, now here, now there.
The craving for sensual pleasures,
The craving for non-existence.
Truth of the cessation of suffering.
It is the utter fading away and cessation of that very craving,
The giving it up,
The abandoning it,
The detachment from it.
Truth of the course leading to the cessation of suffering.
It is the Noble Eightfold Path.
Among things, Bhikkhus,
not heard of before
Special knowledge arose,
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF SUFFERING.”
Light arose, “THAT, THE NOBLE TRUTH OF SUFFERING MUST BE COMPLETELY KNOWN.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF SUFFERING HAS BEEN COMPLETELY KNOWN.”
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING MUST BE GIVEN UP.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE UPRISING OF SUFFERING HAS BEEN GIVEN UP.”
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING MUST BE REALISED.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE CESSATION OF SUFFERING HAS BEEN REALISED.”
Light arose, “THAT, THIS IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF SUFFERING.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF SUFFERING MUST BE DEVELOPED.”
Light arose, “THAT, WHICH IS THE NOBLE TRUTH OF THE COURSE LEADING TO THE CESSATION OF SUFFERING HAS BEEN DEVELOPED.”
And so long, Bhikkhus, the Vision of Knowledge of these Four Noble Truths with the three sections and twelve modes as they really are, was not well purified by me, So long was I, Bhikkhus, could not admit that “I wasaperfect Buddha who had attained the full supreme ENLIGHTENMENT, in the midst of the world with its Devas, with its Maras, with its Brahmas, with its Recluses and Brahmas, its creatures with Devas and Men.”
But when, Bhikkhus, the Vision of knowledge of these Four Noble Truths, with the three sections and twelve modes, as they really are, was well purified by me. Then, Bhikkhus, I could admit that “I wasaperfect Buddha who had attained the full supreme ENLIGHTENMENT, in the midst of the world with its Devas, with its Maras, with its Brahmas, with its Recluses and Brahmans, its creatures with Devas and Men.”
Moreover, the Vision of knowledge arose to me, “Unshakable is freedom for me, this is the last birth, now there is no rebirth.”
This is what the Bhagava had said, and the group of five Bhikkhus were delighted and rejoiced at what the Bhagava had said.
Further-more, while this explanation was being uttered, Vision of the Dhamma, dustless, stainless arose to the Venerable Kondanna.
“Whatever has the nature of uprising all that has the nature of cessation.”
And when the Bhagava had proclaimed the discourse on the turning of the Wheel of Dhamma, The Earth Devas raised the shout.
“The supreme Dhamma wheel proclaimed by the Bhagava in Benares at the deerpark, Isipatana cannot be contradicted byarecluse, or Brahman or Deva or by Mara or by Brahma or by anyone in the world.”
Having heard the shout of the Earth Devas, The Devas of the Four Great Kings shouted
together, “….. ….. ….. ….. ….. ….. .”
Tavatimsa Devas ….. ….. “….. …..”.
Yama Devas ….. ….. ….. ….. “….. …..”.
Tusita Devas ….. ….. ….. “….. …..”.
Nimanarati Devas ….. ….. “….. …..”.
Paranimitavasavati Devas ….. “…..”.
Baramakarika Devas shouted together,
“The supreme Dhamma wheel proclaimed by the Bhagava in Benares at the deerpark, Isipatana, cannot be contradicted byarecluse, or Brahman or Deva or by Mara or by Brahma or by anyone in the world.”
Thus, in that moment, in that second, in that instant the shout reached as far as the Brahma-world.
And the Ten Thousand-Fold World-system trembled, quaked and quaked again, shook violently to and fro.
And an immeasurable and mighty radiance appeared in the world, surpassing the Devas own glory.
Then the Bhagava uttered this solemn utterance
“Indeed, Kondanna has understood,
Indeed, Kondanna has understood.”
Thus, it was that Annasi Kondanna became the name of Venerable Annasi Kondanna.
Then, The Venerable Annasi Kondanna,
Having seen Dhamma,
Plunged into Dhamma,
Having crossed over doubt,
Having put away uncertaintity,
Having attained confidence,
Without depending on others in the Teacher’s religion, spoke to the Bhagava,
“May I, Bhante, get to leave the world in the presence of the Bhagava, May I get the ordination?”
And the Bhagava said,
“Come, Bhikkhu, The Dhamma has been well expounded, Practice the holy life rightly, For making an end of suffering.”
So this came to be the ordination of the long lived Venerable Kondanna.
Posted by ကဗျာမလေး at 8:38 PM9comments Links to this post
အချစ်ဟာ ဟင်းတိုင်းမှာပါတဲ့ ဆားလို
Posted by ကဗျာမလေး at 7:16 PM 1 comments Links to this post
ဒေါသတကယ်ပျက်လေမှ လောကအလယ် မျက်ရည်မကျတော့မှာပါ
Posted by ကဗျာမလေး at 12:05 AM2comments Links to this post
အပျော်နဲ့ ငိုတာလည်း မတော်မတည့် အပိုပါပဲ
Posted by ကဗျာမလေး at 11:53 PM0comments Links to this post
ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟစတဲ့
Posted by ကဗျာမလေး at 10:59 PM0comments Links to this post
သေချာပေါက် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရမှာပါ။
Posted by ကဗျာမလေး at 9:40 PM0comments Links to this post
Posted by ကဗျာမလေး at 6:04 PM0comments Links to this post
Posted by ကဗျာမလေး at 11:38 PM5comments Links to this post
ချိုးရေမက တိုးဝေကျတဲ့ ငါ့မျက်ရည်
Posted by ကဗျာမလေး at 10:29 PM 1 comments Links to this post
Posted by ကဗျာမလေး at 8:10 PM2comments Links to this post
Posted by ကဗျာမလေး at 7:52 PM0comments Links to this post